LABOUR PICKETS ZIMBABWEAN EMBASSY IN ABUJA – Abuja Reporters
LABOUR PICKETS ZIMBABWEAN EMBASSY IN ABUJA
Posted on February 1, 2019 February 2, 2019 Authoradmin
The Nigeria Labour Congress (NLC) on Friday picketed the Zimbabwean Embassy in Abuja, demanding the immediate and unconditional release of workers and labour leaders arrested while protesting the increase in the prices of fuel in that country.
President of the Nigeria Labour Congress, Comrade Ayuba Wabba who led the workers said if the Zimbabwean government refuse to release the Union leaders, workers across the world will be mobilised to shut down the Zimbabwean embassies across the world.
Wabba who is also the president of the International Trade Union (ITUC ) asked the United Nations to invoke relevant international conventions to protect the right of workers in Zimbabwe.
He said ITUC and the Nigeria Labour Congress will petition the International Court of Justice to protest the violation of human rights in that country and the violence that follow the peaceful protest by the workers.
Wabba also asks the International Labour Organization (ILO) and the African Union to invoke relevant labour conventions in dealing with the issue in Zimbabwe, adding that it was an irony that the same government which the labour union fought for is the one hunting down labour leaders.
He said organised labour in Nigeria will not hesitate to seal up the embassy in Abuja if the Zimbabwean government failed to adhere to their calls and release the detained labour leaders in that country.
Wabba called on the Zimbabwean Government to release detained leaders of the Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) and 39 others arrested for participating in protest march over fuel price increase.
Wabba said that the NLC has followed with a sense of outrage the ugly incidents that have trailed the mass protests in Zimbabwe, adding that that the protest was occasioned by the sudden increase in pump prices of petroleum products by the government of Zimbabwe.
He said: “the protest is against what many Zimbabweans perceive as insensitive policy choices by the government of Zimbabwe. The Nigerian working class family is sad that what should have passed as a civil action in democratic climes was met with disproportionate use of force by the Zimbabwean military and security forces.
← Previous Previous post: MAN KILLED FOR DEMANDING 3MIL NAIRA FROM DAUGHTER’S LOVER
Next → Next post: ATIKU HEADING FOR VICTORY SAYS THE ECONOMIST